China Dodecyl Trimethyl Ammonium chloride ， CAS No. 112-00-5 iinqwelo ezili-1231 mveliso kunye nabenzi | Imichiza yaseKerui
I-dodecyl trimethyl ammonium chloride (1231)
Inombolo ye-CAS 112-00-5
Igama lorhwebo: 1231
I-lauryl trimethyl ammonium chloride
Quaternary ammonium ityuwa 1231
ICationic quaternary ammonium yetyuwa 1231
I-Dodecyl trimethyl ammonium chloride(1231, Lauryl trimethyl ammonium chloride) isetyenziswa njengemichiza yokubulala ukungunda kwimizi-mveliso kunye nezolimo, kunye nefungicides yonyango lwamanzi.
I-Dodecyl trimethyl ammonium chloride (1231, Lauryl trimethyl ammonium chloride) isetyenziswa njengearhente ye-antistatic ye-synthetic fibers kunye ne-softener kunye ne-antistatic agent kwi-textile nakwimizi-mveliso yemihla ngemihla.
I-Dodecyl trimethyl ammonium chloride (1231, iLauryl trimethyl ammonium chloride) inokusetyenziswa njenge-emulsifiers kumbala, idayi nakwamanye amashishini.
I-Dodecyl trimethyl ammonium chloride (1231, iLauryl trimethyl ammonium chloride) inokusetyenziswa njenge-emulsifier enokumelana nobushushu bamanzi kumdaka we-emulsion yeoyile xa kusombiwa imithombo enzulu kumzi mveliso weoyile, kunye nokukhupha iarhente kunye nearhente yokuzahlula kushishino lweemulsion.
I-Dodecyl trimethyl ammonium chloride (1231, Lauryl trimethyl ammonium chloride) inokusetyenziswa njengesitshixo esixabisekileyo sensimbi sokwahlula izinto ezinqabileyo zomhlaba kunye nokwahlulwa kwe-niobium, antimony kunye ne-chromium, njl .; Ingasetyenziselwa njengearhente yehemolytic kuhlalutyo lwesampulu yegazi;
I-Dodecyl trimethyl ammonium chloride (1231, iLauryl trimethyl ammonium chloride) ine-98% yokucaciswa komxholo, ukuba kukho imfuneko, nceda ufowunele iinkcukacha.
I-Octadecyl trimethyl ammonium chloride (1231) yinto ekrwada yokuhlanganiswa kwemichiza phakathi, thintela ukudibana neliso nolusu, wakuba uqhakamshelane nawe, ugungxule ngamanzi.